Cosmetics တွေဘယ်ကစ…………. | CosmeticMyanmar
Home » Article » Cosmetics တွေဘယ်ကစ………….
Cosmetics လို့ခေါ်တဲ့အလှကုန်ပစ္စည်းတွေဟာဟိုးနှစ်ပေါင်းခြောက်ထောင်ကျော်လောက်ကတည်းကစတင်သုံးစွဲခဲ့ကြပြီးခုခေတ်မှာတော့တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်နဲ့နေ့တိုင်းမရှိမဖြစ်မပါမဖြစ်တဲ့အရာတစ်ခုတောင်ဖြစ်လာနေခဲ့ပါပြီနော်။ တချို့ကျတော့လည်း ဟိုးကျောက်ခေတ်လောက်ကတည်းကအစပြုခဲ့ကြတာပါလို့ပြောနေကြပါတယ်။ ဘယ်ချိန်ကပဲစခဲ့စခဲ့ခုတော့ပျိုမေတိုင်းရဲ့အဖော်မွန်ဖြစ်နေရတာကတော့လက်တွေ့ပါပဲနော်။
သုသေသနပညာရှင်တွေရဲ့ အထောက်အထားတွေအရဆိုရင်တော့ ရှေးပဝေသဏီက ရောမလူမျိုးတွေနဲ့ ဂရိလူမျိုးတွေကနေအများဆုံးတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အစောဆုံးဖွံ့ဖြိုးခဲ့တဲ့ အလှအပဆိုင်ရာပစ္စည်းတစ်ခုကို အီဂျစ်ပြည်မှာတွေ့ရှိခဲ့ပြီး အဲဒါကတော့ ကြက်ဆူဆီဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ အဲ့ဒီကြက်ဆူဆီကို အသားလှဖို့အတွက်ကရင်မ်၊ ဆီမွှေးအဖြစ်သုံးကြပြီး ပါဝင်ပစ္စည်းတွေအနေနဲ့ ပျားဖယောင်း၊ သံလွင်ဆီနဲ့နှင်းဆီရေတွေကို ထည့်သွင်းဖော်စပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ရှေးတုန်းက ဂရိလူမျိုးတွေကလည်း အလှအပပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုခဲ့ကြပြီး အဓိကမှတ်တမ်းအနေနဲ့ သမ္မာကျမ်းစာရဲ့ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲမှာရေးသားထားတာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့– ဓမ္မရာဇဝင်စတုတ္ထစောင် ၉:၃၀ မှာ – ‘ယေဟုသည် ယေဇရေလမြို့သို့ရောက်သည်ကို ရေဇဗေလသည် ကြားလျှင် မျက်ခမ်းတို့ကိုဆေးသုတ်၍ ဆံပင်ကိုတန်ဆာဆင်ပြီးမှ ပြတင်းပေါက်ဝ၌ ကြည့်ရှုလျက်နေ၏’ လို့ရေးထားပါတယ်။ အဲဒါဘယ်ကာလကလဲလို့ အကြမ်းဖျင်းပြောမယ်ဆို BC 840 လောက်ကဖြစ်ပြီး အခုလက်ရှိခုနှစ်နဲ့တွက်မယ်ဆို နှစ်ပေါင်း ၂၈၀၀ ကျော်လောက်ကဖြစ်ခဲ့တာပါ။ မိန်းကလေးတွေများ ဟိုးရှေးရှေးကတည်းက အလှအပကြိုက်ခဲ့ကြတာနော်။ (ပုံကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်းသုံးထောင်သုံးရာကျော်လောက်က eyeliner ခြယ်ထားတဲ့ Nefertiti လို့ခေါ်တဲ့ အီဂျစ်ပြည်ရဲ့ ဘုရင်မကြီးပါ။)
ပြီးတော့ ရှေးတုန်းက တန်ခိုးထွားခဲ့တဲ့ရောမအင်ပါယာကြီးဟာ make up တွေကို တီထွင်ခဲ့တဲ့တဲ့ သမိုင်းတွေလည်းအများကြီးရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ အသားဖြူစေဖို့အတွက် နည်းလမ်းတွေကိုအမျိုးမျိုးကြံဆတီထွင်ခဲ့ကြတဲ့အပြင် မျက်လုံးအလှအတွက်လည်း KOHL လို့ခေါ်တဲ့ ကာချယ်(အရင်ခေတ်ကအခေါ်ပေါ့လေ) သို့မဟုတ် eye liner တွေကိုတီထွင်ပြီး အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။
အဲ့ဒီကာလကတည်းက အမျိုးမျိုးသော အသားအရေပြဿနာတွေအတွက် အမျိုးမျိုးသော ပစ္စည်းတွေနဲ့ ကြံစည်ပြီးသုံးနေကြပါပြီ။ ဉပမာ အရေးအကြောင်းတွေအတွက်ဆို ဒန့်သလွန်ရွက်တွေသုံးတာတို့ အပူလောင်တာနဲ့ အမာရွတ်တွေအတွက်ဆို သဖန်းပင်တစ်မျိုးကရတဲ့အဆီအနှစ်တွေနဲ့ ရွှံ့နီတွေကိုအထူးပြုလုပ်ပြီးသုံးတာမျိုးတွေ တွေ့ရပါတယ်။ ပျားရည်ကိုတော့ အလှအပရေးရာနဲ့ အမာရွတ်တွေအတွက် တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်သုံးတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ အမယ်… lotion တို့ cream တို့အတွက်ကျတော့ ပျားဖယောင်းနဲ့ ထင်းရှုးပင်ကရတဲ့ အဆီတွေကို သုံးခဲ့ကြပါတယ်နော်။ ဆက်ရှာကြည့်ရင် ထိပ်ပြောင်တဲ့လူတွေအတွက်လိမ်းဆေးတွေဘာတွေတောင် ထပ်ထွက်လာနိုင်တယ်။ (ဟိဟိ)
အဲ့ဒီကာလမှာ အလှပြင်တယ်လို့ပြောရင် အဓိကအနေနဲ့ မျက်လုံးကာချယ်(eyeliner) ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ အထင်တော့ မသေးလိုက်နဲ့နော်။ သူတို့ဆိုးခဲ့တဲ့ eye liner ပုံစံလေးကခုခေတ်မှာအမိတို့ဆိုးနေကြတဲ့ပုံစံလေးအတိုင်းပါပဲနော်။ သူတို့ကတောင်ပိုတော်တယ်ပြောနေရဦးမယ်။ ကဲ အဲ့ဒီခေတ်ကအလှပြင်တဲ့ပုံနဲ့သူတို့အသုံးပြုခဲ့ကြတဲ့အလှအပပစ္စည်းလေးတွေကိုမြင်ဖူးတယ်ရှိအောင်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်နော်။
ကြေးခေတ်ကအသုံးပြုခဲ့တဲ့ cosmetic box တစ်ခု
Tiye ဘုရင်မကြီးလို့ကမ္ပည်းထိုးထားတဲ့ ကာချယ်ထည့်တဲ့ပစ္စည်း (1410~1372 BCE) ကတော့ အီဂျစ်ကပါ။
BC 500 ~ 800 မှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့ ကာချယ်ထည့်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ပြီး အီရန်မှာတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Facial Foam အကြောင်း သိကောင်းစရာများ......